#AvotsoryKhayrullo: Mitaky ny rariny ho an’ilay mpanao gazety Tajik miatrika fitsarana ny vondrona mpiaro ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2018 15:10 GMT
Sary fanentanana FreeKhayrullo (Avotsory i Khayrullo) avy any Okraina. Nozarain'ny @MAjourno.
Khayrullo Mirsaidov no iray amin'ireo feo sivily vitsy an'isa farany indrindra izay tsy namelan'ny governemanta mpanao didy jadona Tadjikistan tamin'ny famoretana mahery vaika indrindra nandritra ny taona maro natao tamin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny mpanohitra.
Mpanao gazety mahaleotena malaza sady mpitarika ny vondrona mpanao hatsikana tao an-toerana teo aloha izay efa foana ankehitriny, manefa sazy 12 taona an-tranomaizina noho ny fiampangana mampiahiahy amin'izao fotoana i Mirsaidov .
Tamin'ny volana Novambra 2017, taorian'ny nanoratan'i Mirsaidov taratasy ho an'i Emomali Rahmon mpitondra Tajik izay nanaovany fitarainana momba ny fihetsik'ireo manamboninahitra manao fitrandrahana ara-toekarena sy ara-politika ao amin'ny toeram-ponenany any amin'ny faritanin'i Sogd dia voampanga ho manao fanodinkodinana, fampiasana tsy ara-dalàna ny volam-panjakana, ary ny fanaovana tatitra diso tany amin'ny polisy izy taty aoriana.
Tao anatin'ilay taratasy dia nanamarika i Mirsaidov fa nisy manampahefana iray avy ao amin'ny faritra nangataka azy tsolotra mitentina 1.000 $ mba hamoahana ny famatsiam-bola ho an'ny vondrona mpanao hatsikana tarihiny, izay nisolontena an'i Tadjikistan tamin'ny fifanintsanana tany Rosia ary vatsian'ny governemanta vola amin'ny ampahany.
Raha tokony handoa vola izy handraisany anjara tamin'ny lalao dia nisafidy ny hitory izany i Mirsaidov ary hampahafantatra ny lehiben'ny manampahefana, anisan'izany i Rakhmon mpanjakazaka. Notanana am-ponja vonjimaika nanomboka hatramin'ny 5 Desambra 2017 ilay mpanao gazety 40 taona, ary notsaraina ihany sy voampanga tamin'ny 11 jolay.
Khayrullo Mirsaidov. Sary avy amin'i Antuan Veselov. Nahazoana alalana.
Tokony hampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana avo alohan'ny 15 Aogositra ny mpisolovavan'i Mirsaidov, saingy nahemotra amin'ny 22 Aogositra ny fitsarana. Nanatevin-daharana ny fanentanana notarihin'ny naman'i Mirsaidov sady mpanao gazety mitovy asa aminy, Michael Andersen, ho amin'ny #FreeKhayrullo (Avotsory i Khayrullo) ny vondrona mpiaro zon'olombelona am-polony sy olona an-jatony manana fifandraisana amin'i Azia afovoany sy Tajikistan.
Hoy ny anjelikelinay hoe: Avotsory i Khayrullo sy ireo gadra politika ao Tajikistan
Misaotra betsaka an'ity anjely ity sy ny ray aman-dreniny!
Tajikistan: Voasazy 12 taona an-tranomaizina ilay voafonja noho ny fanehoan-kevitra Khairullo # Mirsaidov . Miaraka amin'ireo fikambanana miisa 12 hafa mpiaro ny zon'olombelona, ​​mangataka ny famotsorana azy avy hatrany izahay!
Ny hafatra fanohanako ny #AvotsoryiKhayrullo
Nanao sary hosodoko ho amin'ny fanentanana #AvotsoryiKhayrullo ilay mpanakanto Britanika TONYDENTON1.
Vao haingana i Andersen no nanoratra fanomezam-boninahitra mampihetsi-po izay nozaraina betsaka ho an'i Mirsaidov, izay niarahany niasa tamin'ny fanadihadiana maro sy tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny fampitam-baovao, tao amin'ny tranokalan'ny Open Democracy. Nitatitra momba ny kolikoly tao Tadjikistan i Mirsaidov sy momba ireo lohahevitra sosialy sy politika ho an'ny famoaham-baovao, anisan'izany ny tranonkala tsy miankina ao Tajikistan Asia Plus sy ny fampitam-baovao goavana Alemà Deutsche Welle.
Tao anatin'ny fanadihadiany dia nanoratra i Andersen fa efa nanao “izay lazain'ny ankamaroan'ny mpanao gazety fa efa nataony, kanefa vitsy aminay no tena manao izany – raha tononina dia ny filazana ny marina amin'ny manampahefana” i Mirsaidov ary manameloka ny “valiny voapasopasoka avy amin'ireo mpanao politika sy governemanta Tandrefana” amin'ny fanenjehana an'i Mirsaidov.
Rehefa nangina nanoloana ny raharaha talohan'ny nivoahan'ny fiampangana dia namoaka fanambarana ny Masoivohon'i Etazonia sy ny Fanjakana Britanika ao Tadjikistan izay manasongadina ny “ahiahin'izy ireo goavana” manoloana ny fanamelohana an'i Mirsaidov tamin'ny volana Jolay. Namoaka antso ny masoivoho Britanika mba hamotsorana an'i Mirsaidov tamin'ny 14 Aogositra. .
Zaraiko ny fomba fijeriko
Nahoana no mankahala tenirohy ny governemanta Tajikistan
Efa nahitana fahombiazana tamin'ny lasa ny fanentanana mitovy amin'ny #AvotsoryKhayrullo. Tamin'ny taona 2014, notanana noho ny fiampangana fivadiham-pitokisana nandritra ny nanaovany fikarohana ara-tsosialy tany atsinanan'i Tajikistan ny toniandahatsoratry ny Global Voices teo aloha any Azia Afovoany Alexander Sodiqov.
Niaraka tamin'ny fanohanan'ny mpianatry ny oniversite sy ny mpampianatra tany Eoropa, Azia ary Amerika Avaratra, nanosika ny sehatra fampahalalam-baovao lehibe, anisan'izany ny BBC sy ny New York Times hanoratra momba ny raharaha ny herin'ny fanentanana #AvotsorySodiqov – hilaza ny fiampangàna tsy ara-drariny.
Herinandro vitsivitsy taorian'ny nanombohany, navoaka ny fonja i Alex. Navela handao ny fireneny izy taty aoriana mba hihaona indray amin'ny fianakaviany tany Canada, izay nonenany nanomboka teo .
Ilay mpanao gazety Michael Anderson, namana akaiky an'i Mirsaidov, nitarika ny fanentanana #AvotsoryKhayrullo. Pikantsarin'ny lahatsary avy amin'ny sampan-draharaha RFE/RL's Current Time.
Tsy mbola nahazo ny fandrakofam-baovao toy ny an'ny #AvotsorySodiqov ny #AvotsoryKhayrullo, saingy mihamitombo hatrany izany ary mampatsiahy zavatra amin'ny fomba maro.
Tsy maintsy, avy any ivelan'i Tadjikistan no hiavian'ny tabataban'ny fanentanana. Raha samy nanao fandrakofana ireo tranga roa ireo ny sehatra fampahalalam-baovao tsy miankina ao Tadjikistan dia iharan'ny fandrahonana fanakatonana avy amin'ny manampahefana izy ireo raha toa ka mitatitra olana saropady amin'ny fomba mahasorena ny governemanta. Tsy maintsy manao zavatra am-pisainana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Tao anatin'ny taona vitsy lasa izay, nogadraina fotsiny noho ny fisoloantena ireo mpanao politika mpanohitra tany amin'ny fitsarana ireo mpisolovava Tajik.
Na dia ho an'ireo Tajiks mipetraka any ivelany aza dia misy ny sandan'ny fanentanana amin'ny anaran'ireo mpiray tanindrazana aminy.
Manontania fotsiny an'i Shabnam Khudoydodova , mpikatroka iray monina any Eoropa, izay nanohana ny #AvotsoryKhayrullo sy ny fanentanana hafa.
Ny zanany vavy 10 taona vao haingana no lasa lasibatry ny fanentanana madinika nataony #AvotsoryFatima rehefa namoaka azy sy ny reniny Khudoydodova efa zokiolona tsy handray fiaramanidina handao ny firenena ny mpitandro filaminana Tajik ho fanasaziana an'i Khudoydodova noho ny fikatrohany sy ho fisorohana ny fihaonan'ny fianakaviany indray.
Nandritra ny herinandro latsaka kely nipoiran'ny tenirohy anefa dia navelan'ny manampahefana hiala ny firenena ny renin'i Khudoydodova sy ny zanany vavy ary ny anadahiny.
Ireo tantaran'i Khudoydodova.
Hahomby ve izany ho an'ny #AvotsoryKhayrullo ?
Sarotra ny raharahan'i Mirsaidov noho ny efa maha voaheloka azy. Saingy hanaitra ny governemanta Tajik ny fanairana iraisampirenena.
Tahaka ny ankamaroan'ireo firenena mpanao didy jadona tsy dia fanta-daza loatra eto amin'izao tontolo izao, mamela ny governemanta ho amin'ny sehatra fanampiny ho famoretana tsy misy fanaraha-maso ny tsy fahafantarana loatra an'i Tajikistan. Amin'ny alalan'ity lojika mampalahelo ity, dia mora kokoa indraindray ho an'ny fitondrana ny manaiky manoloana ny faharesena ara-pitsarana mba hisorohana ny hafa tsy hahazo vahana amin'ny fifantohan-tsaina.
Na dia tsy afaka manakana ny lala-kizoran'i Tajikistan amin'ny ankapobeny amin'ny fanalavirana ny zon'olombelona aza ny fanentanana an-tserasera dia mbola afa-miantoka fandresena kely azony ihany izy ireo.
Ny Human Rights Watch (Mpanara-maso ny Zon'Olombelona), ny Reporters Sans Frontières, ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety, ny Fanohanana ny Fampitambaovao Iraisampirenena, ny Article19 ary ny Fikambanana ho an'ny zon'olombelona ao Azia Afovoany dia anisan'ireo vondrona maro miady hanafahana an'i Mirasaidov. Jereo ao amin'ny Twitter izy ireo ary tohano ny fanentanana amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenirohy #AvotsoryKhayrullo .